How to enable on-screen navar button in MIUI(ROOT Method) - Myanmar - Mi Community - Xiaomi
[MIUI] How to enable on-screen navar button in MIUI(ROOT Method)
This post was edited by KoHsetGyi at 10:20, Apr-26-2017
Dear all Myanmar MIUI lovers,
Today , I would like to share you how to enable screen navar button in MIUI Rom(Root method). If you want to enable screen navar button but your phone can't support it , please follow this guide step by step.
1:Your Phone must be installed TWRP.
2:Your Phone must be installed SuperSu.zip.(root)
3:ES File Explore (or other root file manager).
At first, You must install TWRP for your phone . (you can find for your phone twrp in forum search and recommend for ZCX TWRP)
Then, install supersu.zip from your twrp (TWRP recovery > Advance > Super Su > swip to confirm flash.Your phone will be reboot.
ပထမဆုံး ဖုနျးမှာ TWRP သှငျးထားရပါမယျ ။ မိမိသကျဆိုငျရာဖုနျးအတှကျ TWRP ကို Forum Search ကနေ ရှနိုငျပါတယျ။ ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျ ZCX TWRP ကို အကွံပွုလိုပါတယျ ။ TWRP သှငျးပီးရငျ supersu သှငျးပါ။ (TWRP recovery > Advance > Super Su > swip to confirm flash. ပီးရငျ စကျကို restart ခပြါ။
ပထမဆုံး ဖုန်းမှာ TWRP သွင်းထားရပါမယ် ။ မိမိသက်ဆိုင်ရာဖုန်းအတွက် TWRP ကို Forum Search ကနေ ရှနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ZCX TWRP ကို အကြံပြုလိုပါတယ် ။ TWRP သွင်းပီးရင် supersu သွင်းပါ။ (TWRP recovery > Advance > Super Su > swip to confirm flash. ပီးရင် စက်ကို restart ချပါ။
After installed TWRP and SuperSu, install ES File Explore (or other root file manager).
Open ES File Explore and firstly enable root explore in the setting of root explore file manager. Then ,go to root>System.
TWRP နဲ့ SuperSu သှငျးပီးရငျ ES file explore (သို့) အခွား root file manager တဈခုခုကို ထညျ့ပါ။
ES file explore ကိုဖှငျ့ပါ။ ပထမဆုံး အနနေဲ့ Root explore ဆိုတာလေးကို ဖှငျ့ပေးထားပါ။ ပီးရငျ file manager ရဲ့ root ကနေ system ကို သှားပါ။
TWRP နဲ့ SuperSu သွင်းပီးရင် ES file explore (သို့) အခြား root file manager တစ်ခုခုကို ထည့်ပါ။
ES file explore ကိုဖွင့်ပါ။ ပထမဆုံး အနေနဲ့ Root explore ဆိုတာလေးကို ဖွင့်ပေးထားပါ။ ပီးရင် file manager ရဲ့ root ကနေ system ကို သွားပါ။
open the build.prop with ES Note Editor.Select the menu( up -right3dots icon) and choose Edit.
build.prop ဆိုတာလေးကို ဖှငျ့လိုကျပါ။ ပျေါလာတဲ့အထဲက ES Note Editor နဲ့ဖှငျ့ပါ။ ပီးရငျ ညာဘကျ အပျေါ ထောငျ့မှ အစကျသုံးစကျကိုနှိပျပီး Edit ကို ရှေးပါ။
build.prop ဆိုတာလေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့အထဲက ES Note Editor နဲ့ဖွင့်ပါ။ ပီးရင် ညာဘက် အပေါ် ထောင့်မှ အစက်သုံးစက်ကိုနှိပ်ပီး Edit ကို ရွေးပါ။
add the following line to the end.
အောကျဆုံးကို အောကျက စာလေးထညျ့ပေးလိုကျ ပါ။(ပုံတှငျကွညျ့ပါ)
အောက်ဆုံးကို အောက်က စာလေးထည့်ပေးလိုက် ပါ။(ပုံတွင်ကြည့်ပါ)
Then, click the back button and Save.
Reboot your phone and check the scree navar button is enabled.
ပီးရငျ back button ကိုနှိပျပီး Save လိုကျပါ။ ဖုနျးကို restart ခလြိုကျပီး on screen navar button ရပီလား စဈကွညျ့ပေးပါ။(ပုံတှငျကွညျ့ပါ။)
ပီးရင် back button ကိုနှိပ်ပီး Save လိုက်ပါ။ ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပီး on screen navar button ရပီလား စစ်ကြည့်ပေးပါ။(ပုံတွင်ကြည့်ပါ။)
screen button setting will be added in the phone setting and you can set screen navar button hidding on or off.
setting>Additional Setting>Buttons>Screen buttons can be hidden on or off.
အဆငျပွတေယျဆိုရငျ screen button setting က ဖုနျး ရဲ့ setting ထဲမှာ ပျေါနပေါပီ။ hide လုပျမယျ မလုပျဘူး ရှေးပေးလို့ ရပါပီ။
အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် screen button setting က ဖုန်း ရဲ့ setting ထဲမှာ ပေါ်နေပါပီ။ hide လုပ်မယ် မလုပ်ဘူး ရွေးပေးလို့ ရပါပီ။
Congraulations. Your phone is now working with screen navar button.
ဂုဏ်ယူပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းမှာ on screen button လေး အလုပ်လုပ်နေပါပီ။
ဂုဏျယူပါတယျ ။ သငျ့ရဲ့ဖုနျးမှာ on screen button လေး အလုပျလုပျနပေါပီ။
Thanks for your attention.I have tested with Mi 5s.
Haveanice day, all Myanmar MIUI Fans.
1589794438 | from mobile
Nice thread.Ota fail for editing system?
OTA update will be received but it will be full rom update and you will not get incremental update.
1627653023 | from app
Nice thread.thank you
This post was edited by KoHsetGyi at 10:20, Apr-26-2017 Dear all Myanmar MIUI lovers, Today , I would like to share you how to enable screen navar button in MIUI Rom(Root method). If you want to enable screen navar button but your phone can't support it , please follow this guide step by step.Requirments:1:Your Phone must be installed TWRP.2:Your Phone must be installed SuperSu.zip.(root)3:ES File Explore (or other root file manager). At first, You must install TWRP for your phone . (you can find for your phone twrp in forum search and recommend for ZCX TWRP)Then, install supersu.zip from your twrp (TWRP recovery Advance Super Su swip to confirm flash.Your phone will be reboot.ပထမဆုံး ဖုနျးမှာ TWRP သှငျးထားရပါမယျ ။ မိမိသကျဆိုငျရာဖုနျးအတှကျ TWRP ကို Forum Search ကနေ ရှနိုငျပါတယျ။ ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျ ZCX TWRP ကို အကွံပွုလိုပါတယျ ။ TWRP သှငျးပီးရငျ supersu သှငျးပါ။ (TWRP recovery Advance Super Su swip to confirm flash. ပီးရငျ စကျကို restart ခပြါ။ပထမဆုံး ဖုန်းမှာ TWRP သွင်းထားရပါမယ် ။ မိမိသက်ဆိုင်ရာဖုန်းအတွက် TWRP ကို Forum Search ကနေ ရှနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ZCX TWRP ကို အကြံပြုလိုပါတယ် ။ TWRP သွင်းပီးရင် supersu သွင်းပါ။ (TWRP recovery Advance Super Su swip to confirm flash. ပီးရင် စက်ကို restart ချပါ။After installed TWRP and SuperSu, install ES File Explore (or other root file manager).Open ES File Explore and firstly enable root explore in the setting of root explore file manager. Then ,go to rootSystem.TWRP နဲ့ SuperSu သှငျးပီးရငျ ES file explore (သို့) အခွား root file manager တဈခုခုကို ထညျ့ပါ။ES file explore ကိုဖှငျ့ပါ။ ပထမဆုံး အနနေဲ့ Root explore ဆိုတာလေးကို ဖှငျ့ပေးထားပါ။ ပီးရငျ file manager ရဲ့ root ကနေ system ကို သှားပါ။ TWRP နဲ့ SuperSu သွင်းပီးရင် ES file explore (သို့) အခြား root file manager တစ်ခုခုကို ထည့်ပါ။ES file explore ကိုဖွင့်ပါ။ ပထမဆုံး အနေနဲ့ Root explore ဆိုတာလေးကို ဖွင့်ပေးထားပါ။ ပီးရင် file manager ရဲ့ root ကနေ system ကို သွားပါ။open the build.prop with ES Note Editor.Select the menu( up -right3dots icon) and choose Edit.build.prop ဆိုတာလေးကို ဖှငျ့လိုကျပါ။ ပျေါလာတဲ့အထဲက ES Note Editor နဲ့ဖှငျ့ပါ။ ပီးရငျ ညာဘကျ အပျေါ ထောငျ့မှ အစကျသုံးစကျကိုနှိပျပီး Edit ကို ရှေးပါ။build.prop ဆိုတာလေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့အထဲက ES Note Editor နဲ့ဖွင့်ပါ။ ပီးရင် ညာဘက် အပေါ် ထောင့်မှ အစက်သုံးစက်ကိုနှိပ်ပီး Edit ကို ရွေးပါ။add the following line to the end.အောကျဆုံးကို အောကျက စာလေးထညျ့ပေးလိုကျ ပါ။(ပုံတှငျကွညျ့ပါ)အောက်ဆုံးကို အောက်က စာလေးထည့်ပေးလိုက် ပါ။(ပုံတွင်ကြည့်ပါ)qemu.hw.mainkeys=0Then, click the back button and Save.Reboot your phone and check the scree navar button is enabled.ပီးရငျ back button ကိုနှိပျပီး Save လိုကျပါ။ ဖုနျးကို restart ခလြိုကျပီး on screen navar button ရပီလား စဈကွညျ့ပေးပါ။(ပုံတှငျကွညျ့ပါ။)ပီးရင် back button ကိုနှိပ်ပီး Save လိုက်ပါ။ ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပီး on screen navar button ရပီလား စစ်ကြည့်ပေးပါ။(ပုံတွင်ကြည့်ပါ။)screen button setting will be added in the phone setting and you can set screen navar button hidding on or off.settingAdditional SettingButtonsScreen buttons can be hidden on or off.အဆငျပွတေယျဆိုရငျ screen button setting က ဖုနျး ရဲ့ setting ထဲမှာ ပျေါနပေါပီ။ hide လုပျမယျ မလုပျဘူး ရှေးပေးလို့ ရပါပီ။settingAdditional SettingButtonsScreen buttons can be hidden on or off.အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် screen button setting က ဖုန်း ရဲ့ setting ထဲမှာ ပေါ်နေပါပီ။ hide လုပ်မယ် မလုပ်ဘူး ရွေးပေးလို့ ရပါပီ။settingAdditional SettingButtonsScreen buttons can be hidden on or off.Congraulations. Your phone is now working with screen navar button.ဂုဏ်ယူပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းမှာ on screen button လေး အလုပ်လုပ်နေပါပီ။ဂုဏျယူပါတယျ ။ သငျ့ရဲ့ဖုနျးမှာ on screen button လေး အလုပျလုပျနပေါပီ။Thanks for your attention.I have tested with Mi 5s.Haveanice day, all Myanmar MIUI Fans.Sorry for my bad English.